राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी कि, झलनाथ खनाल ?::NepalBhaskar
राष्ट्रपतिमा विद्या भण्डारी कि, झलनाथ खनाल ?
काठमाडौं, २ माघ । गत मंसिरमा सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभा तथा प्रादेशिक सरकार निर्वाचनको गृहकार्यसँगै नयाँ राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपति, सभामुखरउपसभामुखको चर्चा चुलिँदै गएको छ। निर्वाचनमा ६०र४० को भागबन्डा गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रको स्पष्ट बहुमत रहेकाले राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपति, सभामुखरउपसभामुख वाम गठबन्धनबाटै हुने देखिएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेत वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई दोहोर्‍याउने पक्षमा सकारात्मक देखिएका छन्। तर, दुई पार्टीबीच पार्टी एकताका क्रममा नेताहरूको व्यवस्थान गर्ने क्रममा नयाँ राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपतिका साथै सभामुख÷उपसभामुख परिवर्तन हुने सम्भावना बढी छ।
माओवादी केन्द्र भने प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष एउटा एमाले र एउटा माओवादीले बाँड्नुपर्ने र राष्ट्रपति र सभामुख दुई संवैधानिक निकायसमेत एकरएक वटा बाँडफाँट गर्नुपर्ने पक्षमा छ। पद बाँडफाँटका क्रममा राष्ट्रपति माओवादीको भागमा परेको अवस्थामा नेता रामबहादुर थापालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने योजनामा माओवादी केन्द्र रहेको छ। माओवादीको औपचारिक र अनौपचारिक बैठकमा थापालाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने विषयमा चर्चा भए पनि दुई पार्टीबीच पदीय बाँडफाँट भइनसकेकाले निर्णय भइसकेको छैन। राष्ट्रपतिमा थापा नहुने अवस्थामा उनी राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बन्ने निश्चित जस्तै छ। माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धन निकट तर स्वतन्त्र छविको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन सकिनेसमेत जनाएको छ।
माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुखलगायत पदको विषयमा छलफल भएको तर निष्कर्षमा पुगिनसकेको जानकारी दिँदै राष्ट्रपतिमा स्वतन्त्र छविको व्यक्ति ल्याउन सकिने बताए। वाम गठबन्धनभित्र पदीय भागबन्डाको विषय भने टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। यसअघि दुई पार्टीले एक अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्का अध्यक्ष पार्टी अध्यक्ष हुने बताए पनि सहमति जुट्न बाँकी छ। आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।